ဒါလေးပြောချင်တယ် ရွာသူရွာသားတွေရယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒါလေးပြောချင်တယ် ရွာသူရွာသားတွေရယ်
Posted by ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္) on Dec 14, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 37 comments
ဒီပို့စ်လေးကိုတင်ရတဲ့ အကြောင်းက ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် တာဝန်မကျေဘူးထင်လို့ တင်လိုက်ရခြင်းပါ။ ကျွန်တော်က တာဝန်မကျေဘူးဆိုတော့ ကျန်တဲ့သူတွေရောတဲ့။ ကျေပါတယ်ဗျာ။ ကျေလိုက်သမ အားနာမိရလောက်အောင်ကို တာဝန်ကျေကြတာ။ ကျွန်တော်က ရွာထဲမှာ ကိုယ်ရေးချင်တာရေးပြီး ပြန်လှည့်မကြည့်တဲ့ လူတစ်ယောက်လိုများဖြစ်နေပြီလားလို့။ ကျွန်တော် တင်သမျှ ပို့စ်တွေကို ဝိုင်းပြီး Commentပေးကြတဲ့ ဂေဇက်ရွာသူရွားသားတွေကို ပြန်ပြီး အကြောင်းမပြန်နိုင်တာ။ တစ်ခါတစ်လေမှ( ဒါလည်း ဝေးလွန်းလှပါတယ်) ကျွန်တော် Commentဝင်ရေးဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အခြား သူတွေရဲ့ ပို့စ်တွေကို ဝင်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ပေါ့ဗျာ။ Commentတစ်ခုတောင် ကျွန်တော် မရေးသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါတွေကြောင့် တာဝန်မကျေဘူးလို့ထင်တာပါ။ စာရေးသူဆိုတာ ကိုယ်ရေးသမျှစာတွေ သူများတွေဖတ်နေဖို့ချည်းရယ်လို့ မသတ်မှတ်သင့်တာကိုလည်း သဘောပေါက်ပါရဲ့။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုဟာ လိုကိုလိုအပ်တာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပြေးပြေးလွှားလွှားဖြင့် ရွာထဲလာ။ ပြီးရင် ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ ပို့စ်ကိုတင်ပြီး ပြန်ပြန်ထွက်သွားရတာ ခဏခဏပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဂေဇက်မန်ဘာတွေ သိပ်ကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သော်ဇင်(လွိုင်ကော်)ဆိုတဲ့ ကလောင်တစ်ချောင်းကို ပစ်မထားကြပါဘူး။ ရေးလိုက်သမျှ ပို့စ်တိုင်းမှာ အားတက်စရာ Commentတွေကို ချန်ချန်ထားခဲ့ကြတယ်။
မချိတင်ကဲပြောကြတယ်။ အားမလို အားမရ ပြောကြတယ်။ မကြိုက်တာကို မကြိုက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အားဆေးတွေ။ ခွန်အားတွေပါ။ ကျွန်တော် တခြား တခြားသော Group တွေမှာလည်း စာတွေတင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်မပေးနိုင်မှုကြောင့် နောက်ကျနေရတဲ့အကြောင်းလေးတွေရှိနေပါတယ်။ တော်တော်ကြာ ဂေဇက် ရွာသူရွာသားတွေ ရွှေစိတ်တော် ငြိုငြင်မှာစိုးတော်မူနေတာကြောင့် ဒီပို့စ်လေးဖြစ်လာရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပို့စ်တွေကိုလာခဲ့တဲ့ ဧည့်သည်တော်တွေကို ကျွန်တော် ဒီလို မှတ်တမ်းလေး ပြုထားပါတယ်။ ကြည့်ကြဦးပေါ့ဗျာ။ မတော်တဆများ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမည်ပိုင်ရှင်တွေရှိရင်လည်း လက်ကျန်သည်းခံခြင်းလေးနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့။ မရတဲ့ အချိန်တွေကိုပေးပြီး ကျွန်တော် မှတ်ထားရတာဖြစ်လို့ပါ။ မျက်စိလျှမ်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရေဗက္ကာဖြစ်နေနိုင်လို့ပါ။ တခြားမတွေးပါနဲ့ဗျာ။ နမော်နမဲ့ ဖြစ်တာကိုပြောတာ။
တော်တော်ကြာ သော်ဇင်(လွိုင်ကော်)ဆိုတဲ့ သူက ရေဗက္ကာနဲ့ ဘာလိုလိုထင်နေပါဦးမယ်။ ကဲ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘော်ဘော် ကိုကိုမမ၊ ညီ၊ ညီမများကို ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ နောက်များ အချိန်ပေးနိုင်လာတာနဲ့အမျှ ဂေဇက်ထဲမှာ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ကြီးကို (အဲလေ) အပြုသဘောဆောင် ဝေဖန် Commentတွေရေးသွားမယ့်အကြောင့်ကြိုတင် ကတိပြုပါတယ်။ အောက်က မှတ်တမ်းထဲမှာ ကျွန်တော်မျက်စိလျှမ်း၍ကျန်ခဲ့သော ဘော်ဘော်များအား အားနာမိကြောင်း….
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကျန်လူသား သခင် Mobile
10. jullies cezer
11. Mr. MarGa
12. Mon Kit
15. Shwe Tike Soe
16. ရွှေ ကြည်
19. သခင် Mobile
23. Shwe Ei
25. စိုင်း ကွမ်းခေး
26. ရွာသူ jujuma
27. juu juu
29. Ma Ei
33. Alpha Vanishing
35. athwe lay
42. နှင်းဆီ ငုံ
43. Thu Wai
48. ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ
50. kotun winlatt
52. Fall Guy
55. Khaing Khaing
57. မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ
60. HM S
61. Lwin Aung
62. zaw min
Mobile ဆိုသည့် အမည်နာမ သုံးမျိုးမှာ အကျွန်ုပ် မောင် Mobile တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါကြောင်း။
တော်ကြာနေ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ဘာတွေပေးရင် သုံးမျိုး စီစဉ်နေမှာ စိုးလို့ပါ။
ဪ တစ်ယောက်တည်းလား နောက်ဆိုရင် ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးတော့မှာမို့ ခုလို ဖြေရှင်းထားတာ ကျေးကျေးပါ။ (နို့မို့ဆို သူတစ်ယောက်တည်း သုံးမျိုးရသွားမှာ ကျန်တဲ့ မန့်သူတွေ နှစ်နာတာပေါ့ဗျာ ဟီး)၏
ကဲပါဗျာ ခင်ဗျားအတွက်…..ကယားပျိုစင်လိုချင်သလား၊ ခေါင်ရည်နဲ့အတူ၊ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်။ (ဒါဆို သုံးမျိုး ကဲ ဘယ့်နှယ့်လဲ)
ခေါင်ရည်၊ လွိုင်ကော်ဝက်အူချောင်းကင်လေးနဲ့ မက်ခါမှုန့်လေး သုံးမျိုးဆိုရင် ပိုအိုကေတယ်တဲ့.
ကိုသော်ဇင်ရေ … ညီမတို့ကတော့ … ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကော်မန့်ပေးသူနည်းရင် ဝင်ပေးမိတယ် .. တစ်ခါတစ်လေလည်း ကိုယ့်စိတ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တာတွရှိရင် ဝင်မန့်မိတယ် … တစ်ခါတစ်လေ ဖတ်ပေမယ့် မမန့်တာတွေရှိတတ်တယ် …. တစ်ခါတစ်လေ တစ်ချို့က ကိုယ်ကစေတနာနဲ့ ကော်မန့်ပေးပေမယ့် ကိုယ့်ကို ပြန်ကလော်တုတ်တာတွေလည်းကြုံရသလို ကိုသော်ဇင်လိုမဆွေးတတ်သူတွေဆိုရင်လည်း စိတ်ထဲ မချင့်မရဲဖြစ်မိတယ် … ငါ့ကော်မန့်ကိုများမလိုလားလို့လားဆိုတဲ့အသိတွေပေ့ါ …. အခုလို မအားမလပ်လို့ Reply မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လည်း စိတ်ထဲကိုယ့်ကော်မန့်ကို အသိအမှတ်ပြုခံထားရတာ သိတော့ ဝမ်းသာမိ ပါတယ် …….
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်မှုလေးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ခို်င်ခိုင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလေးစားတယ်ဗျာ။
Thank you ပါ။
စားရေးသူနဲ့စာဖတ်သူတို့အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုမှုလေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုသော်ဇင်
post တိုင်း comment မရေးဖြစ်ပေမဲ့ အစ်ကိုရေးတဲ့ Post တိုင်းကိုတော့ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် အခြား
အခြားသော Post များလည်းအလျင်းသင့်သလိုဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီရွာထဲမှာက ဗဟုသုတစုံ ရသစုံ
ပြီးတော့ ရွာထဲကလူတွေက ခင်မင်စရာအလွန်ကောင်းတော့ ရွာထဲကိုတစ်နေ့မှာတစ်ခေါက်တေ့ာ
ဟုတ်တယ် တစ်နေ့တစ်ခေါက်မဝင်လိုက်ရရင်တောင် ဆိုင်ရောက်တာနဲ့ အရင်ဆုံးဖွင့်ဖြစ်တဲ့ ဆိုဒ်ကတော့ ဂေဇက်ပါပဲဗျာ..။ ပို့စ်တိုင်းကိုအားပေးဖတ်ရှုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
နောက်များ အချိန်ပေးနိုင်လာတာနဲ့အမျှ ဂေဇက်ထဲမှာ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ကြီးကို (အဲလေ) အပြုသဘောဆောင် ဝေဖန် Commentတွေရေးသွားမယ့်အကြောင့်ကြိုတင် ကတိပြုပါတယ်။
သူများတကာတွေ ဖတ်စေချင်၊ခံစားစေချင် (သို့) တစ်ခုခုရစေချင်လို့မျှဝေကြတာပါ….
ဆိုတော့ ကိုယ်ရေးတဲ့စာအပေါ် ကွန်မင့်ပေးတာ…ပြန်ဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်…
အဲ..စာရေးသူက ပို့စ်တင်ပီးကတည်းက လှည့်မကြည့်နိုင်ပဲ ပျောက်နေမယ်ဆိုတော့
အခုလိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတော့ အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နဲ့ကုက္ကားပေါ့ဗျာ….
ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ သားတွေရွေးကြတဲ့အထဲအမြဲပါတာတွေ့မိပါတယ်…
ကိုသော်ဇင်(လွိုင်ကော်)ရဲ့ ရသမြောက် အတွေ့အကြုံပို့စ်လေးတွေကိုစောင့်ဖတ်နေတဲ့….
ကိုကြီးမိုက်ရေ ခုလို အားပေးလို့ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ…။ ခင်ဗျားလည်း နာမည်တော်တော်ကြီးတယ်နော် ရွာထဲမှာလေ..။
နွေးထွေးသော သဘောကို ဆောင်ပါ၏။
မှတ်မှတ်ရရ 2011 လွိုင်ကော်ကို တစ်ညအိပ်ရောက်တော့ တောင်ကွဲစေတီပေါ်မှာ ခင်ဗျားကို ဖျပ်ကနဲ
ဒါများ ကျွန်တော်ကို တောင်ကွဲစေတီပေါ်ကနေ လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးရော ဖားကန့်ကနေ လွိုင်ကော်ကို ပန်းကန်လုံးစီးပြီး အပြေးပျံခဲ့မှာပေါ့ဗျာ.။ ဟုတ်ကဲ့ ကိုပေါက် (မန္တလေး)ကိုလည်း မှတ်မှတ်ရရ ရှိပါကြောင်း။
နို့မို့ စိတ်ချိုးမို့………. :hee:
အောင်မလေး ခုမှပဲ သက်ပြင်းချရတော့တယ်ဗျာ။ စိတ်တော့ မချိုးနဲ့ဗျို့း။
အူးလေး တော်ဂျင် သီမီးနာမယ်ပါဘူး ချိတ်ချိုးသွားဘီ ချိတ်ချိုးသွားဘီ :harr:
ရွာထဲစိတ်ချိုးတတ်တဲ့ သူနှစ်ယောက်တော့ တွေ့ပြီး၊ ဆရာမ မွန်ကစ်နဲ့ ဆရာမ ဗုံဗုံ ဘဲ။ နောင် သတိထားပြီး ၄ ၄ စား စား ဆက်ဆံရမယ်။ ဆရာမတို့ နှစ်ယောက် နေကောင်းကြတယ်နော်။
ကိုသော်ဇင်ရေ အရေးကောင်းသူမို့ ကွန်မန့်ပြန်မှု့တွေလည်း ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေ ကွန်မန့်တွေထဲမှာ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်က ပြန်ပြီးဖြေကြားသင့်တာမျိုးပါတတ်တယ်မို့ အဲလိုမျိုး ကွန်မန့်တွေကိုတော့ ပြန်ကြားပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ယူဆတယ်ခင်ဗျ။
အောင်မလေးဗျာ စိ်တ်တော့မဆိုးလိုက်ပါနဲ့ဗျာ တောင်းပန်ပါရဲ့ နောက်ထပ် မှတ်တမ်းလာရင် ကြည့်ဗျို့ ထိပ်ဆုံးကမပါရင် နောက်ဆုံးမှာပါမယ် စိတ်ချ
“.အောင်မလေးဗျာ စိ်တ်တော့မဆိုးလိုက်ပါနဲ့ဗျာ တောင်းပန်ပါရဲ့ နောက်ထပ် မှတ်တမ်းလာရင် ကြည့်ဗျို့ ထိပ်ဆုံးကမပါရင် နောက်ဆုံးမှာပါမယ် စိတ်ချ”က ဗုံဗုံအတွက်ပါ..။
ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုပါကြောင်း :hee:
ဟုတ်ကဲ့ဖြောင်း…ဖြောင်း…ဖြောင်း….ကနေ ဗြောင်း…ဗြောင်း…ဗြောင်း မဖြစ်ရင်ပဲ ကျေနပ်တယ်ဗျာ….
ဆက်ရေးဆိုလို့ ဆက်တင်လိုက်ပါတယ် ခေတ်၏ သမီးပျိုနှင့်…………..နီ ကိုလည်း ဖတ်ပေးပါဦးလို့
Comment ရေးတဲ့သူတွေကို သတိတရ အကြောင်းပြန်ပေးတော့ ဝမ်းသာရတာပေါ့
နာမည်လေးတွေက အပြာရောင် အမဲရောင်ဖြစ်နေတာ ဘာဖြစ်လို့များပါလိမ့်နော်…
သိဘူးဗျ….ကျွန်တော် ကူးယူးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာပါ..။ တခြားတော့ မရှိပါဘူး။ အားလုံးအတူတူပါပဲဗျာ။
ကျုပ်က.. ကျောက်စိမ်းနယ်..တကယ့်အဖြစ်တွေအကြောင်း.. ရသနဲ့ တွဲစပ်ရေးသွားတာလေး.. ကြိုက်တာဗျာ…
အဲဒီလိုနဲ့.. မူရင်းပို့စ်ထဲက.. အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေက.. ရုပ်လုံးကြွလာပြီး.. စာဖတ်သူ စိတ်ထဲစွဲစေတာမို့ပါ…။ :harr:
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ နောက်တစ်ခါတော့ စစ်မပြေးပါရစေနဲ့ဗျာ။ တွေးကြည့်လိုက်ရင် စိတ်ထဲ တဒိုင်းဒိုင်းနေတုန်းပဲ။ ခုပဲကြည့်ခေါင်းအထက်က ကျည်တစ်တောင့်ဖြတ်ပြေးသွားသလိုပဲ။
သော်ဇင်(လွိုင်ကော်) ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ရသစာပေတွေနဲ့ တွဲ ပြီး မှတ်မိနေခဲ့တာပါ ။
တပုဒ်ဆိုလျှင် ဆိုသလောက် ၊ တထိုင်တည်းဖတ်တာနဲ့ … ဖတ်တဲ့ လူစိတ်ထဲ ဖီလင် တမျိုးမဟုတ်တမျိုး ချန်နိုင်လောက်အောင် ရေးနိုင်စွမ်းရှိသူမို့ နှစ်သက်အားကျမိပါတယ် ။ အရင်ကတော့ … ကိုသော်ဇင် ရေးသမျှ လိုက်ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် .. ဒီလတွေအတွင်း ကျွန်မကိုယ်တိုင်က အလုပ်ပိနေတာကြောင့် ၊ အတော်များများ လွတ်ကုန်ပါတယ် ။ အခုမှ လက်လှမ်းမှီသလောက်ပြန်ရှာဖတ်နေရပါတယ် ။
ဘယ်အချိန်မှာပဲ ဖတ်ဖတ်ခုလို လက်လှမ်းမှီသလောက်လေးရှာဖတ်နေတာကိုက ကျေးဇူးတင်မိရပါတယ်ဗျာ။
ဦးမာဃလဲ ကိုသော်ဇင့် ပို့စ်တွေ တော်တော်များများ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်
စာဖတ်သူ ဆိုတာကတော့ တစ်ခုခုကို ဖတ်ပြီးရင် ပြောချင်တာလေးတွေ ရှိတတ်ကြတာပဲလေ
အဲဒီတော့ ကွန်းမန့်လေးတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့
ကွန်းမန့်တွေဟာ စာဖတ်သူတွေရဲ့ feedback တွေပါ
အဲဒီ feedback တွေ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး
စာရေးသူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ လဲ ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ဝေဖန်ချက်လေးတွေကို သိရတာပေါ့
အဲဒါတွေကိုပဲ ပြန်ဆွေးနွေးရင်း စာရေးသူနဲ့ စာဖတ်သူတွေ ဆွေးနွေးပွဲလေးတွေ ဖြစ်သွားတာပါဗျာ
ဦးမာဃ တို့ကတော့ ဖတ်မြဲ ဖတ်ပြီး မန့်မြဲ မန့်နေဦးမှာပါ လို့
ဟုတ်ကဲ့ ထိပ်ဆုံးက မှတ်ထားပြီး ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။ ဒါနဲ့ မာဃသစ္စာဆိုတဲ့ ကလောင်ရှင်များလား မသိဘူးဗျ။
ကိုမောင်ပေရေ ကျွန်တော် မျက်စိလည်သွားသလားလို့..။ကဲပါလေ….လာရောက်မန့်လို့ကျေးဇူး။
ဟေးးးးးးးးးးးးး ငါ့နာမည် ပါတယ်ကွ!
သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်နဲ့အတူ စာရေးကောင်းတာကို တွဲပြီး မှတ်မိနေတယ်။
ဂေဇက်မှာ ကလောင်သွေးကြသူတွေ ကြားထဲမှာ တဆင့်မြင့်တဲ့ စာရေးဆရာလို့ သတ်မှတ်ထားတာ။
(စာမူရှင်သည် မိမိစာအပေါ်ကော်မန့်ပေးသူများအား ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူဖြစ်ရမည်။)
ဆိုတဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး ကိုယ်ရေးတဲ့ ပိုစ့်မှာလည်း ကွန်မန့်လာပေးသူကို ပြန်လှန်ရေးပေးဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ကွန်မန့်ပေးထားတဲ့ ပိုစ့်မှာ ဆိုရင်လည်း ဘာများပြန်ပြောမလဲလို့ ပြန်ဝင်ကြည့်ရတယ်။ :hee:
ကိုယ်ကွန်မန့်ပေးထားတဲ့ ပိုစ့်မှာ ဆိုရင်လည်း ဘာများပြန်ပြောမလဲလို့ ပြန်ဝင်ကြည့်ရတယ်။
ဒါက အမှန်ဘဲဂျို့ …
ဂဇက်ကို ဝင်ပြီဆို ..
အနည်းတကာ့ အနည်းဆုံး စာမျက်နှာ ဆယ်ခုဘဲ …
လာမယ့် ကွန်မန့်များအတွက် ဝဲလကမ်းဘာဂျို့ …
ပီးစေဒေါ့ဘော့ … ဟုတ်ဘူးလား …
ကျွန်တော်တောင်ပျော်သွားရသလိုပါပဲ…။ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း မှတ်မှတ်ရရရှိနေပါတယ်။ ပြန်လည်ပြီး မမန့်ရတာကလွဲလို့ပေါ့ဗျာ။
ကိုသော် ရေ အမြဲ အားပေးနေပါတယ်
ကိုအလင်းဆက်ကိုမမြင်မိလို့ စိတ်မကောင်းနေတာ။ ကျေးကျေး။ ဆုနဲ့လွဲလွဲနေလို့ ကိုအလင်းကိုဘယ်လို မှ အားမရနေဘူး။ ရောက်ခါနီးပြီ ကိုအလင်းရေ…။ ပန်းတိုင်ဆိုတာ လက်တစ်ကမ်းမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။